Ra’iisal wasaare Kheyre oo xalay hoygiisa ku booqday Senator Cabdi Qeybdiid |
Ra’iisal wasaare Kheyre oo xalay hoygiisa ku booqday Senator Cabdi Qeybdiid
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku booqday Senator Cabdi Xasan Cawaale oo ah guddoomiyaha Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa Ujeedka booqashadiisa la xiriirtay in uu la qeybsado Senetorka dareenka ka dhashay falkii lagu weeraray Gurigiisa, kaasi oo maalin ka hor ay u galeen ciidamo hubeysan, kadibna Gurigiisa ka fuliyay baaritaano.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u muujiyay Senator Cabdi Qeybdiid in dowladda Soomaaliya ay ka xun tahay falkaasi weerarka ah, islamarkaana ay dowladdu ka jawaabi doonto.
Waxaa falkaasi loo xirey ilaa 41 Askari iyo saraakiil, kuwaasi oo loo haysto in ay ku lug leeyihiin weerarkaasi, waxaana ku socda baaritaano.
Mas’uuliyiintii booqatay guriga Senator -ka kaddib markii uu weerarka dhacay waxaa ka mid ahaa Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo arkay khasaaraha la gaarsiiyay guriga, waxaana uu guddoomiyuhu ku tilmaamay falkaas in uu ahaa mid laga xumaado oo aan la aqbali karin.